China Smart 5 ụdịdị Okenye Sonic Electric Toothbrush EA310 Manufacturer and Supplier | Charmhome
Typedị Batrị DC 3.7V, Batrị Lithium 800mAh
Nha ngwaahịa Φ28 * 255mm
Nha ịbụ 100g
Enwere ike ịhọrọ ụdị 3.5 (Ọcha, White, Polish, Milder, Sensitive) iji hichaa eze.
5. strok 31000 ọrịa strok / min
6.100 ụbọchị Oge ezumike nke batrị mgbe awa 8-10 na-akwụ ụgwọ.
1.Acoustic vibration dị ọcha teknụzụ: Sonic toothbrush gburugburu na 31000 ọrịa strok-Kporie ezé dị mma ma dị mma, debe ọchị gị nwere obi ike. Nweta nhicha zuru oke na mkpọtụ belatara, ma mekwa ka ahụike gị dịkwuo mma naanị ụbọchị 14.
2.5 PTB BR B RBRR - --B --R - - KỌRỌ, WHITE, POLISH, MILDER, SENSITIVE iji kwado mkpa nlekọta nlekọta dị iche iche: dị ka ihe nkwado, njuju, okpueze, na mkpuchi, ma na-enyere aka igbochi oghere iji meziwanye ahụ ike.
3. at Kwekọrọ n'Ozizi na isi iyi ọ bụla, ezé eletriki eletrik a ga-emechi ya mgbe ọ kwụsịrị ụgwọ zuru ezu ma wuo ya na ncheta batrị dị ala. Portable imewe na ogologo ndụ batrị na-akwado USB odori (na-enweghị ihe nkwụnye) na-adaba adaba iji n'ụlọ ma ọ bụ njem - weta ya na njem ọ bụla na mfe iji nkwụnye na eriri USB.
4.Waterproof: IPX7 waterproof ga-adị mma maka gị na ezé ezé, ọ dịghị ajụjụ ọ bụla ọbụlagodi na ị na-eji brọsh ịsa ezé mgbe ị na-asa ahụ ma ọ bụ na-ehicha ya na mmiri.
5.BRISTLE FADING REMINDER iji nye gị ahụmịhe ahụike na ahụike.
Osote: Okirikiri njem Nha nha nkucha CHC001